ငှက်မင်းသား - ဝီကီပီးဒီးယား
Female Scarlet Minivet (Hong Kong, probably P. f. fohkiensis)
အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံများတွင် ငှက်မင်းသား၊ ငှက်မင်းသမီးဟူ သော ငှက်မျိုးများကို တွေ့ရသည်။ ထိုငှက်တို့ကို တစ်မျိုးနှင့် တစ်မျိုး ခွဲခြားမှတ်သားရန် ခဲယဉ်း၏။ ငှက်မင်းသား၏ ပါဏဗေဒအမည်မှာ 'ပီရီကရိုကိုတပ် လမ်မီယပ် အီလီဂန်' ဖြစ်သည်။ ထိုငှက်၌ လှပတင့်တယ်သော အမွှေးအတောင်များ ရှိသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးတွင် အနီရောင် သို့မဟုတ် အဝါရောင် ပေါ်လွင်လျက်ရှိသည်။ ကိုယ်အရွယ် ၉ လက်မခန့်ရှိသည်။ ထိုငှက်မျိုးသည် မြေပေါ်သို့ ဆင်းခဲ၍ သစ်ပင်ထိပ်များတွင် သာ ကျက်စားလေ့ရှိသည်။ အအုပ်အသင်းနှင့် အစာရှာဖွေ လေ့ ရှိသည်။ ခေါင်းဆောင်ငှက်တစ်ကောင်၏ နောက်သို့ စုပြုံကာလိုက်၍ သစ်ရွက်ကြားတွင် ပိုးမွှားများကို ရှာဖွေစားတတ်သည်။
ချိုအေးသာယာစွာလည်း မြည်ကြွေးတတ်သည်။ အသိုက်ကို သစ်ကိုင်းပေါ်တွင် သစ်ကိုင်းနှင့် ရွေးမရအောင် ပြုလုပ်ထား တတ်သည်။ တစ်မြုံလျှင် ၂ ဥ သို့မဟုတ် ၃ ဥရှိသည်။ ဥမှာ ရှည်မျောမျောဖြစ်၍ အစိမ်းနုရောင်ပေါ်တွင် အညိုအစက် အပြောက်များ ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပေ ၆၅ဝဝ အမြင့်အထိ နေကြ၍ အချို့ နေရာတွင် ရာသီအလိုက် ပြောင်းရွှေ့နေတတ်ကြသည်။
↑ BirdLife International (2004). Pericrocotus flammeus. 2006. IUCN Red List of Threatened Species. International Union for Conservation of Nature 2006. www.iucnredlist.org. Retrieved on9May 2006. Database entry includes justification for why this species is of least concern
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ငှက်မင်းသား&oldid=346412" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၁၆:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။